"Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina Izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalàny" - Sal. 25:9.
Ilainao ny mianatra ny lesona lehibe ny amin'ny tokony ho toetran'ny olombelona eo imason'Andriamanitra. Tsy inona izany fa ny hanahaka an' i Jesôsy, ho malemy fanahy sady tsy miavona am-po, ny hitandro ny tombontsoan'ny hafa mihoatra noho ny fitandroanao ny tombontsoan'ny tenanao. (...) Tokony hotanterahinao eo amin'ny fiainanao andavanandro izany, ka hasehonao amin'izany fa tsy nanao tsirambina ianao tao amin'ny sekolin'i Kristy. Tsy afa-mitoetra ao amin'ny fo izay itoeran'i Kristy ny fitiavan-tena. Hanilika izay rehetra mifanila aminy kosa izany raha fikirina. Hitarika anao hanaraka ny filanao izany fa tsy ny adidinao. Hotarihin'izany koa ianao mba hametraka ny izaho ho ivon'ny eritreritra, mba hitady fahafinaretana sy hanaram-po, fa tsy mba hikatsaka izay hahatonga anao ho fitahiana ho an'ny hafa. Ny fanirianao sy ny fahafinaretanao no hanjary laharam-pahamehana ambonin'ny zavatra hafa rehetra (...)
Ny tena fahasambarana dia tsy raisina amin'ny alalan'ny fanaranam-po sy ny fitadiavam-pahafinaretana, fa amin'ny alalan'ny fianarana amin'i Kristy (...) Izay matoky ny fahendren'ny tenany, ka manao araka izay heveriny fa mety, dia hitaraina isaky ny indray mandingana, satria mavesatra loatra ny enta-mavesatra izay atambabin'ny fitiavan-tena eo an-damosin'izy ireo (...)
Tia ny tanora i Jesôsy , ary faniriany fatratra ny hananan'izy ireo ilay fiadanana izay avy Aminy irery ihany. Miantso azy ireo Izy mba hianatra Aminy ny fahalemem-panahy sy ny tsy fiavonana am-po. Tsy fahita firy eo amin'ny tanora ankehitriny izany fanomezam-pahasoavana sarobidy izany, na dia eo amin'ireo izay milaza ny tenany ho Kristianina aza. Heverin'izy ireo fa mety ny ataony. Manaiky ny anaran'i Kristy izy ireo, saingy tsy manaiky handray ny toetrany. (...) Vokatr'izany dia tsy mahalala na inona na inona momba ny fifaliana sy ny fiadanana izay raisina amin'ny fanompoana Azy izy ireo. — YI, 21 Novambra 1883
Raha mihatra ao an-tokantrano ny fahalemem-panahin'i Kristy, dia hitondra fahasambarana ho an'ny tsirairay izay ao izany. Tsy mihantsy ady ny fahalemem-panahin'i Kristy, tsy mamaly amim-pahatezerana, fa manalefaka ny toetra mitratrevatreva, sy manapariaka fahatsaram-panahy izay tsapan'ny manodidina rehetra. Ho tonga anisan'ilay fianakaviambe any ambony ny fianakaviana eto an-tany raha ankamamiana izany. TMB, 32.